Warshadda Alaabta Cusub - Shiinaha Soo -saareyaasha Alaabta Cusub iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Dunida alaabta carruurtu ku ciyaarto waa mid xiiso leh, ma aha oo kaliya carruurta laakiin sidoo kale dadka waaweyn ee jecel inay ka nastaan ​​dunida dhabta ah. Waxaan nahay kooxda xirfadleyda hal abuurka leh iyo kuwa gaarka ah kuwaas oo sanad walba abuuri doona alaabta carruurtu ku ciyaarto ee hal-abuurka leh. Oo ay ku jiraan kuwa caagga ah ee biraha/birta ku duuban, kubbadda caagga ah, giraanta fidinta birlabka si loo yareeyo walbahaarka & welwelka shaqada, iyo sidoo kale xirmooyinka kobcinta hal -abuurka carruurta. Iyada oo leh maaddo heer sare ah oo shahaado leh, badbaado leh, waarta oo waarta. U hoggaansanaanta heerar badan oo toy oo adag, oo ay ku jiraan EN71, USA ASTM F963, Taiwan ST iyo Japan ST, oo waafaqsan xadka CPSIA ee leedhka iyo phthalates. Waxyaabaha kala duwan waxay buuxiyaan shuruudo kala duwan. Xiiso kasta, fadlan si xor ah nala soo xiriir. Waxaan maareyneynaa inaan isku keeno madadaalada ugu fiican, barashada iyo farsamada si aan u gaarsiino badeecad aad u wanaagsan.
Keychain Xayeysiin Dheeraad ah ee Caadiga ah
PU Xumbo Jilicsan Carruurta Ciyaaraha
Alaabta Sawirka Xoolaha
Zinc Daawaha Fidget Spinner
Caaga Fidget Spinner
Farta Qiyaasta Keychain